Nnwom 45 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔhene a wɔasra no no ayeforohyia
N’anom kasa yɛ dɛ (2)
“Onyankopɔn ne w’ahengua daa” (6)
Ɔhene ani begyina ayeforo no ahoɔfɛ (11)
Wo mma bɛyɛ mpanyimfo wɔ asaase nyinaa so (16)
Wɔde ma dwom kyerɛfo; ɔkwan a wɔfa so to no: “Sukooko.” Kora mma dwom.+ Maskil.* Ɔdɔ ho dwom. 45 Asɛmpa bi akanyan me koma. Mise: “Me dwom no* fa ɔhene bi ho.”+ Ma me tɛkrɛma nyɛ sɛ ɔkyerɛwfo a ne ho akokwaw+ kyerɛwdua.+ 2 Wo ho yɛ fɛ sen nnipa mma nyinaa. W’anom kasa yɛ dɛ sɛ.+ Ɛno nti na Onyankopɔn ahyira wo daa no.+ 3 O Otumfo,+ fa wo sekan bɔ w’asen+Wɔ anuonyam ne nidi mu.+ 4 Na kodi nkonim w’anuonyam mu;+Nokware, ahobrɛase ne trenee nti, tena wo pɔnkɔ so na ko,+Na wo nsa nifa bɛyɛ* anwonwadwuma. 5 W’agyan ano yɛ nnam, ɛma aman hwehwe ase wɔ w’anim;+Ɛwowɔ ɔhene no atamfo koma mu.+ 6 Onyankopɔn ne w’ahengua daa daa,+Na w’ahenni poma yɛ atɛntrenee* ahempoma.+ 7 Wodɔɔ adetrenee,+ na wukyii adebɔne.+ Ɛno nti na Onyankopɔn, wo Nyankopɔn, de ahurusi+ ngo asra wo+ sen wo mfɛfo no. 8 Kurobow ne pɛprɛ ne kasia dua yi hua wɔ wo ntaade nyinaa mu;Sɛ wɔbɔ sanku wɔ ahemfi kɛse a wɔde asonse* ayɛ no mu a, wudi ahurusi. 9 Wo mmea a wɔwɔ anuonyam no, ahemfo mma mmea ka ho. Ɔhemmaa no abegyina wo nsa nifa so, na ɔde Ofir sika kɔkɔɔ+ asiesie ne ho. 10 O ɔbabea, tie, na yɛ aso;Yi w’adwene fi wo nkurɔfo ne wo papa fi so. 11 Na ɔhene ani begyina w’ahoɔfɛ,Efisɛ ɔno ne wo wura,Enti kotow no. 12 Tiro babea de akyɛde bɛba;Adefo mu adefo bɛhwehwɛ w’anim dom. 13 Ɔhene babea ho yɛ fɛ boro so wɔ ahemfi hɔ;Wɔde sika kɔkɔɔ abobɔ n’ataade mu.* 14 Sɛ wɔde no rebrɛ ɔhene no a, wɔbɛhyɛ no ntaade a wɔanwene no fɛfɛɛfɛ. Wɔde mmaabun a wɔka ne ho bɛbrɛ wo. 15 Ahurusi ne anigye mu na wɔde wɔn bɛba;Wɔbɛhyɛn ɔhene ahemfi. 16 Wo mma besi w’agyanom ananmu, Na wobɛpaw wɔn ma wɔayɛ mpanyimfo wɔ asaase nyinaa so.+ 17 Mɛma wɔahu wo din wɔ awo ntoatoaso a ɛbɛba nyinaa mu.+ Ɛno nti na aman beyi wo ayɛ daa daa no.
^ Nt., “Me nnwuma.”
^ Nt., “bɛkyerɛkyerɛ wo.”
^ Anaa “trenee.”
^ Anaa “anwene n’ataade.”